မာ့ခ်၏ ကိုယ်ပိုင် အတဿ္တများ: Google's preferred sites
Google's preferred sites
ဂူဂယ်က ဂျီမေးတို့၊ ဘလော့ဂါတို့ လော့ခ်အင်ဝင်ထားပြီး ရှာတဲ့ အချိန်မှာ သွားထားတဲ့ ဆိုဒ်တွေကို မှတ်ထားပုံပေါ်ပါတယ်။ preference ထဲကိုသွားလိုက်ရင် Preferred sites ဆိုပြီး ကိုယ်သွားလေ့ရှိတာတွေကို results မှာ ထိပ်ဆုံးကနေ တက်အောင်လုပ်လို့ရမယ်ထင်ပါတယ်။
Add - cisco.com Add - ja.wikipedia.org Add - php.net
Add - en.wikipedia.org Add - w3schools.com Add - msdn.microsoft.com
Add - docs.python.org Add - msdn2.microsoft.com Add - ubuntuforums.org
Add - twitter.com Add - code.google.com Add - mmgeeks.org
ကျနော်ဆို mmgeeks.org နဲ့ code.google.com တို့က သွားလေ့သွားထရှိပါတယ်။ အထက်ပါ အခြားဆိုဒ်တွေကို လဲသွားဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုဒ်ရဲ့ နာမည်ကြီးမှုပေါ်မူတည်ပြီး စီထားပေးပုံရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် mmgeeks.org က မြန်မာဆိုဒ်ဆိုတော့ နိုင်ငံခြားဆိုဒ်ထက်ယှဉ်ရင် priority နိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးမှာ ပေါ်တာပါ။
ဒါပေမယ့် Add ဆိုပြီး ထဲ့ထားလိုက်ရင် တော့ ရှာတိုင်း mmgeeks.org က result တွေထိပ်ဆုံးမှာ ပေါ်လာမှာပါ။
ရေးသားသူ : မာ့ခ် နေ့စွဲ : Sunday, March 29, 2009
ကဏဿဍ : Google, Tips
preference site ဆိုတာဘယ်နားမှာလဲ။ တကယ်မသိလို့မေးတာ။
ဂူဂယ်မိန်းပေ့ခ်ျမှာ Preferece ဆိုတဲ့ ခလုတ်ရှိတယ် မKOM. အဲဒီကနေသွားလို့ရတယ်။
မြောက်ကိုးရီးယားမှ ဒုံးပျံ ကာကွယ်ရေး
Opera raise js Error for UTF8 Without BOM (signatu...
Marie Digby - Umbrella (cover) at 熊本城 (Kumamoto Ca...
English to Myanmar Translator from Myanmar NLP (Wi...
Memo ; MySQL UTF8 create Database and create Table...
Congratulations Japanese Baseball Team!
Regular Verb မှ Simple Past ပြောင်းပုံပြောင်းနည်း ...
Firefox 3.6 Alpha 64 bit Windows
Search POS (Part of Speech) using NLTK
Firefox 3.6 Alpha
GetaEnglish Word under mouse cursor with Javascr...
Making Extension for Python is easier than PHP esp...
နည်းပညာသည် လူတိုင်းအတွက် ဖြစ်ရမည်။
Japanese Broadband Internet User use bandwidth 990...
大好きなアザラシ　:D :D :D